कति छ रवी लामिछानको सम्पत्ती, महिनामा कति कमाउँछन् ? – List Khabar
Home / समाचार / कति छ रवी लामिछानको सम्पत्ती, महिनामा कति कमाउँछन् ?
admin November 22, 2021 समाचार Leaveacomment 77 Views
काठमाडौ । टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता जति चर्चित छन् त्यती नै बेलाबेलामा विवादित हुने गरेका छन् । उनले उठाउने सामाजिक विषयले उनलाई चर्चा दिलाएको हो । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका
नेपालीहरुको समस्यालाई समाचारका विषय बनाउने रवी लामिछाने त्यसै कारणले सबैको प्रिय पात्र बन्ने गरेका छन् । विदेशमै अप्ठेरोमा परेका धेरै नेपालीको उनले उद्दार पनि गरेका छन् ।
वि सं २०३१ साल भदौ २० गते भक्तपुरमा जन्मिएका लामिछाने सिधासादा निमुखाको भरोसाको रुपमा देखिएका छन्।भर्खरै मात्र न्यूज २४ टेलिभिजन छोडेर केहि समय गुमनाम रहेका उनी आफ्नै ‘ग्यालेक्सी ४ के’मा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन्।
धेरै पत्रकारले भ्रस्टचार गरेर करोडौं कमाएका र अनियमितता गरेको समयमा धेरैले उनको सम्पति कति भनेर प्रश्न गरिरहेका हुन्छन्।
Previous सरकारले फेरि लकडाउन लगाउने गर्यो घोषणा, लकडाउन पहिला जस्तै हुने
Next दुबईमा श्रमिक अभावपछी नेपालीको लागि खुल्ला गर्यो यस्ता भिसा..